UZITHENGA NJANI KWAYE PHI IINVENS NOOK (HXN) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
UziThenga njani kwaye phi iiNvens Nook (HXN) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 2: Thenga i-BTC ngemali ye-fiat
Inyathelo 3: Dlulisa i-BTC kwiAltcoin Exchange
Inyathelo 4: Idiphozithi ye-BTC yokutshintsha
Inyathelo 5: Urhwebo ngeHXN
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-HXN ngokukhuselekileyo kwii-wallet zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lweHXN
I-HXN luphawu olusekwe e-Ethereum olwazisa ubungqina obutsha bokuzonwabisa (POF). Yonwaba kwaye iinzame zakho ziya kuvuzwa nge-HXN. Sitshintsha umdlalo ngo:
Ukutsala abantu abatsha kwi-crypto
Ukukhuthaza uluntu ngokusebenzisa iinjongo ezifanayo
-Ukonyusa ulwazi lwe-blockchain ngendlela ekhuselekileyo nengoyikisiyo kunye nokukhuthaza ukwamkelwa kwabantu abaninzi.
-Ukwenza umdla nge-FUN endaweni yeendlela eziqhelekileyo.
I-Havens Nook yiprojekthi exhaswa ngemali eyenziweyo ngabathandi be-crypto kwihlabathi liphela.
Ixabiso langoku le-HXN yi- $ 0.18 kwaye ibekwe kwi-3530 kwi-Coinmarketcap kwaye kutshanje inyuse iipesenti ezingama-52.49 ngexesha lokubhalwa.
I-HXN idwelisiwe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthenga ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. I-HXN inokuthengwa ngoku. .
Kuya kufuneka uqale uthenge enye yeemali ezinkulu zokugcina imali, kule meko, i-Bitcoin (BTC). Kweli nqaku siza kuhamba ngeenkcukacha ezimbini zotshintshiselwano oluqhelekileyo lokusetyenziswa kwe-fiat-to-crypto, Uphold.com kunye neCoinbase. Zombini ezi zitshintshiselwano zinemigaqo-nkqubo yazo yemirhumo kunye nezinye izinto esiza kudlula kuzo ngokweenkcukacha. Kuyacetyiswa ukuba uzame zombini kwaye ufumane eyona ikulungeleyo.
uyibona njani i-tweet esusiweyo
Umtya we-golang wokubaleka
Ngoku usete, cofa iqhosha u 'Trade' ngasekhohlo phezulu, khetha iBitcoin kwaye uqinisekise ukuthengiselana kwakho ... kunye nemihlali! Uthengile nje okokuqala ukuthenga i-crypto.
Ngoku sele usete, kwiscreen se 'Transact' phantsi kwentsimi ethi 'Ukusuka', khetha i-fiat currency yakho, emva koko kwicandelo 'To' ukhethe iBitcoin, cofa kuqala ukujonga ukuthengiselana kwakho kwaye ucofe uqinisekise ukuba yonke into ibonakala intle. .. kunye nemihlali! Uthengile nje okokuqala ukuthenga i-crypto.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-HXN yi-altcoin ekufuneka siyidlulisele kutshintshiselwano ukuze i-HXN ithengiswe. Apha ngezantsi luluhlu lotshintshiselwano olunikezela kurhwebo nge-HXN kwiibini ezahlukeneyo zentengiso, intloko kwiiwebhusayithi zazo kwaye ubhalise iakhawunti.
Nje ukuba ugqibile uya kuthi emva koko ubeke i-BTC kutshintshiselwano kwi-Coinbase. Emva kokuba idiphozithi iqinisekisiwe unokuthenga i-HXN kumbono wotshintshiselwano.
yemari ikhonkco yemakethe
Tshintshisa iMarike yokuThengisa Isango.io (ixhaswe) I-MEXC yeHlabathi (ixhaswe) Binance (ixhaswe) I-Txbit HXN / ETH I-Txbit HXN / BTC Ingcaciso HXN / USDT
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano okoko i-HXN idweliswe apho iya kutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-HXN yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokugcina zikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kweintanethi kwidilesi yoluntu nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye uyigcine ikhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
usenza njani isixhobo kwi-Netflix
Ndingayithenga i-HXN ngemali?
Ngaba zikhona iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-HXN eYurophu?
Ngaba kukho amanye amaqonga okuthenga i-HXN okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-HXN ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-BTC kuqala, kwaye ugqibe onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-BTC yakho kutshintsho lweAltCoin.
Funda ngakumbi kwiziseko zeHavens Nook kunye nexabiso langoku apha.
qhagamshela uluhlu lwe-netgear extender
Ungazithengisa njani iimpawu zokukhaba
uyithenga phi i-pitbull
Ungayiseta njani i-msrm wifi extender
td ameritrade api isifundo